Shaqo laawayaasha oo kontoroolka lagu xoojinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqo laawayaasha oo kontoroolka lagu xoojinayo
La daabacay onsdag 31 juli 2013 kl 09.37
Bisha soo socota waxaa isbedel weyn lagu sameynayaa nidaamka caymiska shaqo la’aanta ee loo yaqaano a-kassa. Isbedelkaan ayaa noqon doona in ruuxa shaqo la’aanta ah uu bilkasta u gubiyo laanta shaqada Arbetsförmedlingen warbaxino uu ku sheegayo sida uu shaqo u raadsadey.
Ruuxa aan warbaxintas gudbina waxuu qatar ugu jiri doonaa in uu waayo mudo gaaban amaba dheer caymiska a-kassa. Isbeldkan cusub ayaa la filayaa in uu kordhiyo howlaha shaqo oo ay qabtaan xarumaha a-kassa taas oo la filayo in ay noqdaan 160 000 howl sannadkii. Katarina Mattsson waxay madax u tahay ururka mideeya a-kassada.
- Waa isbedelweyn. A-kassooyinka waxay shaqaaleeyeen dad aad u badan si ay howl-shan cusub uga soo baxaan oo ay dowladda noo dirtey. Waxaan maleynayaa in a-kassooyinka shaqaaleyeen ugu yaraan 150 gcanyarayaal, ayey tiri Katarina Mattsson oo madax u ah ururka ay ku mideysanyahiin caymisyada a-kassa.
Waxay aheyd gu,gii la soo dhaafey marka barlamaanka Iswedhen go’aamiyey isbedel lagu sameeyo nidaamnka caymiska shaqo la’aanta ah. Ruuxa shaqo la’aanta ahna waxuu isbedlekan kaga micno yahay in bil kasta laga rabo warbaxino la xiriira shaqo raadintiisa taas oo u gudbinayo laanta shaqada arbetsförmedlingen . warbaxinta ayaa la doonayaa in uu ruuxa ku sheego sida u qorsheysan in uu uga baxo shaqo laanta. Ruuxa aan sameynina sidaas waxuu weyn doonaa caymiska. Laakiin bilowga hore ayeysan cinqaabta noqon doonin mid sidaas u sii adag.
- Mida ay kaga gedisantahay nidaamyadii hore ee cinqaabeed ayaa ah in marka hore ruuxa la siinayo digniin oo qofka shaqo raadiyaha ah fursad loo siinayo si uu ku bedalo hab-dhaqankiisa uuna wax uga qaato, ayey tiri.
Manta ayey cinqaabo tahay tusaale; ruuxa aan shaqo raadsanin amaba ka baaqda intervju shaqo, in laga dhimo caymiskiisa shaqo 25 illaa 45 maalmood gunooyinkood. Balse isbedelka cusub oo hirgeli doona kowda september ayaa yeelan doona jaranjarooyin cinqaabeed kuwaas oo marba marka ka sii danbeysa cinqaabto lagu sii adkeynayo ruuxa dayaca u hogaasanka nidaamkan cusub.
- Jaranjarada waxey ka micno tahay in ay marmaba marka ka danbeysa kordhayso malmaha caymis ee uu weynayo qofka illa uu marka danbe gabi ahaantoodba ka waayo, ayey tiri Katarina Mattsson.
Balse kalogedisananta cinqaabaha ayaa sidoo kale ka micno ah in howlaha uga imaanaya laanta shaqada ay kusoo bataan A-kassada oo ayna gaaraan 80 000 illa 160 000 sannadkii. Madaama ay tahay a-kassoyinka kuwo laga doonayo in ay go'aamiyaan jarnjarada ciqaabeed ee la marsiinayo ruuxa ay laanta shaqada dacwada ka soo gudbisey.